एमाले एकता घोषणा , अध्यक्ष छोड्न ओली तयार ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
एमाले एकता घोषणा , अध्यक्ष छोड्न ओली तयार !
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ताको तयारी भएको खुलासा गरेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद समाधानको लागि दुवै नेतालाई आफ्नै पहलमा भेटवार्ता गराउन लागेको पाण्डेको भनाई छ । पत्रकार ऋषि धमलासँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेता पाण्डेले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
एकताको लागि दुवै तर्फका नेताहरु जिम्मेवार ढंगले लागिपरेको भन्दै सकारात्मक नतिजा आउने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने-“ढिलो चाँडो एमाले एकता हुन्छ । अध्यक्ष छोड्न ओली तयार हुनुभएको छ । अब उहाँ संसदीय दलको नेता भएर बस्नेसम्मको कुरा छ ।